Xaaladda magaalada Gaalkacyo oo ay dagaalada ka dhaceen iyo sida saakay lagu waabariistay (AKHRISO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Wararkii ugu dambeeyay ee saakay laga helaayo xaalada magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa ah mid degan, iyadoo ay jirto xiisad colaadeed oo ka dhex jirta ciidamada kala taabacsan maamulada Galmudug iyo Puntland.
Ciidamada Galmudug iyo Puntland ayaa ciidamo badan kala geeyay galbeedka magaalada Gaalkacyo, halkaas oo maalintii shalay uu labadaasi dhinac iska hor-imaadku ku dhex maray, kaasoo ka dhashay qasaare dhimasho iyo dhaawac leh.
Dadka deegaanka ayaa qaarkood gebi ahaan isaga barakacay guryahooda, iyagoo u ruqaansaday deegaanada ku yaala duuleedka Gaalkacyo.
Warar hoose oo ay warbaahinta Bulshoweyn ka heleyso magaalada Gaalkacyo ayaa sheegaya in Puntland ay dib u bilawday dhismaha suuqa xoolaha laga hir-gelinayo magaalada, halkaasi oo markii horeba uu dagaalka ka qarxay.
Dhinaca kale, waxaa soo baxaaya baaqyo isdaba-joog ah oo ay jeedinayaan odayaasha dhaqanka iyo isimada gobolka Mudug, waxaana ay ku baaqayaan in xiisada colaadeed la joojiyo, islamarkaana khilaafka lagu xaliyo miiska wada-hadalka.
Si kastaba ha ahaatee, xiisadaan colaadeed ee ka dhex taagan Galmudug iyo Puntland ayaa kusoo beegmaysa xilli la isku diyaarinaayo ololaha doorasho ee dalka, iyadoona baaqyadda ay soo jeedinayaan odayaal dhaqameedka iyo isimada gobolka Mudug, ay u muuqdaan mid aan dheg jalaq loo siinin.